“Neymar qalad ayuu sameeyay kaddib markii uu baxay, haatanna wuxuu dareemayaa qoomamo” – Messi – Gool FM
(Barcelona) 10 Okt 2019. Lionel Messi ayaa xaqiijiyay in saaxiibkiisii hore ee Neymar uu sameeyay qalad kaddib markii uu kooxda ka tagay xagaagii 2017, isagoo xusay inuu haatan ka qoomameynayo go’aankaas xun uu qaatay, islamarkaana uu isku dayayo inuu markale ku laabto garoonka Camp Nou.
Neymar Jr ayaa ku adkaystay inuu ka tago Barcelona si uu ugu dhaqaaqo kooxda Paris St Germain laba sano ka hor, iyadoo uu ku baxay heshiis rikoor ah ee gaarsiisan 222 milyan euro, taasoo ka dhigtay in ilaa iyo haatan uu yahay xiddiga ugu qaalisan taariikhda kubadda cagta.
Xiddiga reer Brazil ayaa suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay wuxuu isku dayay in markale uu dib ugu laabto garoonka Camp Nou, laakiin labada kooxood ayaa waxay ku fashilmeen inay gaaraan wax heshiis ah.
Lionel Messi ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Waxaan u maleynayaa in bixitaankiisa ay ahayd qalad”.
“Haddii aad u taqaano Neymar sida aniga oo kale, isla markaana aad ka war qabto waxa uu la dhibtoonayo iyo noloshiisa Paris, waad ogaan doontaa inuu khalad ku sameeyay bixitaankiisa”.
Si kastaba ha noqotee, Lionel Messi ayaa lagu soo waramayaa in xiriir saaxibtinimo ee aad u adag uu kala dhexeeyo Neymar Jr, inkasta oo ay soo baxayaan warar sheegaya in xiddiga reer Brazil uu kaga tagay Barcelona si uu uga baxo hooska xiddiga reer Argantina, sababtoo ah ma uusan dareemin ixtiraamka saxda ah ee taageerayaasha iyo kooxda.
Inter Milan oo dharbaaxa xoogan la damacsan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona